Ukuba umntwana makanyanzeliswe ukuba adle
Abaninzi bakhumbula ubunzima bokubuntana kwabo: xa umama okanye ugogo wayephoqelelwe ukuba adle i-manna. Kutheni ke, xa siba ngabazali, siphindaphinda yonke into ukususela ekuqaleni, sihamba emva komntwana wethu ngepuni kwaye saphinda amazwi athi, ebuntwaneni, bona bavame ukuva kubazali babo: "Kuba umama, kubaba, ngogogo"?
Izizathu ezi zinto zingalunganga, ukusuka kwindlela yokujonga imfundiso, ukuziphatha kwabazali, zininzi:
Ukoyika ukuba umntwana uya kulamba. Abazali bafanele baqonde ukuba umntwana unamandla amakhulu, olawula isidingo sakhe sokutya-indlala. Ukuba umntwana ulambile, akanakuze anqabe ukudla. Ukuba umntwana enezinyembezi emehlweni akhe ehleli kufuphi neplate esipheleleyo yokutya, kwaye wenqaba ukutya ngaphandle kokukholisa kunye nosongelo - kuthetha ukuba umzimba wakhe awudingi ukutya.
* I-stereotype efanayo: "U-Upritan uphilile". Enyanisweni, le ngcamango ayinakubizwa ngokuba yinyani. Isidingo sokutya nganye kwintsana nganye. Kule nto kuxhomekeke kwiziganeko ezingenasifo zomzimba wakhe. Kuyafana nokugqitywa: ezinye iintsana zona zinkulu kwaye zininzi, ezinye zincinci kwaye zincinci. Ukuba umntwana unyanzelekile ukuba atyale, unako ukuthoma umzimba ngokukhawuleza, kodwa oku kuya kuba yindleko yempilo yakhe. Ngomntwana, isisu sisatye kancane kancane kwaye i-metabolism iphazamisekile. Ukuphazamiseka kwemizimba, kwakhona, kunokususa ukuphuhliswa kwezifo ezinzulu ezifana nokukhuluphala, isifo sikashukela, ukungaphumeleli kwentliziyo, njl.
* Umnqweno wokubonakalisa le ndlela kumntwana uthando lwakhe. Isizathu esiqhelekileyo sokungqubuzana kokutya kukuba abazali baziva bengenakuthathela ingqalelo ngokwaneleyo, uthando kunye nokunyamekela umntwana wabo. Yingakho bazama ukwenza isicatshulwa sabo sengqondo okanye ngokwenene phambi kwayo ngoncedo lokusondeza ukutya. Kucacile ukuba ngale ndlela abazali bazama ukulungisa ingxaki yabo yengqondo ngokunyanzelisa umntwana wabo othandekayo.
Ukuxhalabisa. Abanye abazali bavakalelwa kukuba umntwana wabo uphukile, unqabile, unqabile kwaye unxibe. Nangona kunjalo, ingxaki yoluhlobo oluthathaka lomntwana alukwazi ukungabi nasondlo. Yaye ukuba ngaba abazali baqala ukugqithisa umntwana, ngoko zonke iingxwaba zabo zizongezwa ngokusweleka kwezingane zabo.
Ewe, ukuba umntwana akayidli kakuhle, ingaba yintoni isizathu salokhu?
Izizathu zinokuba luninzi: impilo embi, utshintsho lwemozulu, uxinzelelo. Ukuba, kunye nempilo kunye nenhlalakahle yomntwana, yonke into ihlelekile, ngoko ukutya kwakhe okungafunekiyo kunokukunquma izizathu:
* Inkqubo yokukhula. Kuphawula ukuba abantwana abasempilweni kwiinyanga zokuqala zobomi abahlala besweleka ngenxa yokungabi nesidlo. Into leyo kukuba umntwana ukhula ukuya kwiinyanga ezili-9, kwaye ukukhula kwakhe kuncipha, ngokufanelekileyo, kwaye isidingo sokutya sinciphisa.
* Iimeko ezingqongileyo zengqondo kwintsapho. Umntwana usoloko evakalelwa xa abazali bakhe bexinezelekile, bexhalabile, okanye bakhathazeke. Ubamba umonakalo omama njengentonga - kwaye ke ukulahlekelwa yidlo.
Ukunyuka. Isimiselo sinikwa umntwana ukusuka ekuzalweni. I-Choleric ne-sanguine bayamncelisa isifuba somama, kwaye i-phlegmatic yenza i-lazily, ihlala ilele ekusebenzeni. Ukuba ngumdala, umntwana onjalo unako ukufaka umfutho ngomlomo ozele ukutya, ukulungisa amehlo akhe kwindawo ethile ekude. Kodwa akufanele ugijime umntwana olunjalo - akakwazi ukukhawuleza! Kwaye oko akubonakali nje ekudleni, kodwa kukho konke akwenzayo nokwenzayo.
Abazali abaneengxaki zokunondla abantwana babo, kucetyiswa ukuba:
* Ungaze unyanzele umntwana ukuba adle izitya ezimkhohlakeleyo. Ewe, oku akuthethi ukuba umntwana kufuneka adle kuphela iinqebetho kunye neeholethi. Kodwa ke, ukutya kufuneka kumkholise. Izitya ezihlwayayo zinokuba luncedo, kwaye luncedo - oluhlwaya.
* Ukutya komntwana kufanele kulungiswe. Ukwahlula ngokukodwa ukutya kwasekuseni - musa. Kodwa ngaphambi kokuhlwa kwasemini - akukho ukutyiwa.
* Musa ukuphazamisa ukutya komntwana kunye neesekese, i-gingerbread kunye nekiki. Ukuba umntwana sele sele ekwazi ukuchoboza ii-chocolates ezili-12 ngaphambi kokuba adle, ke akufanele kukumangalise ukuba ibhotela le-buckwheat ibonakala ingenakulungeka kwaye ingenakunceda.
Ngaba ndingayinika ubisi lweenkomo kubantwana beenkomo?
Ukuqaliswa kokutya okuncedisayo kwemifuno
Isondlo esifanelekileyo sabantwana abaneminyaka eli-1 ubudala
I-Porridge iyimfuneko kwimpilo yengane
Ukutya okuluncedo kubantwana
Ukungondleki komntwana, okanye Kutheni umntwana engadli
Isityalo esingaphakathi kwe-ehmeya
Kutheni abantwana befungela kumat
I-Horoscope yeveki kaSeptemba 11-17 evela kuVasilisa Volodina
Superman vs Snowman: iingcamango zokugqoka iimfwenkwe zonyaka
Izibhengezo ezingavamile - umkhanyo oqaqambileyo-2016
I-Mexican shish kebab ekhaya
AmaTattoos kwiindawo ezithandwayo kubasetyhini
Shopoholiya - isifo okanye ukuzonwabisa okungenacala?
I-Casserole evela kwiitatate kunye nokugcoba inyama
Izilwanyana zezilwanyana ze-angina pectoris
Ubhiya ngokukhula kunye nempilo yeenwele
Umhlobo okanye umthandi - andinako ukugqiba